XOG RASMI AH:- Shaqadii guddiga anshaxa oo la badalayo iyo qeylo dhaan arrinkaas laga keenay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG RASMI AH:- Shaqadii guddiga anshaxa oo la badalayo iyo qeylo dhaan arrinkaas laga keenay
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado inay maalinta berri ah ka dhacdo magaalada Muqdisho ayaa la sheegaya in beesha caalamka ay faragelin baahsan ku sameeysay shaqada guddiga anshaxa doorashada oo ay dooneyso in la siiyo awood dheeraad ah.
Guddigaas oo hore u magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa howshiisa ugu weyn aheyd hubinta doorashada iyo warbixin siinta baarlamaanka sidii ay u dhacday.
Saacadihii ugu dambeysay waxaa kulamo isdaba joog ah yeelanayay xubhaha guddiga anshaxa iyo wakiiladda beesha caalamka, waxaana la sheegayaa inay la doonayo in guddigan uu ku dhawaaqi karo inay doorashada ay ku dhacday sharci darro markii loo baahdo, taasoo ka baxsan awoodii guddiga sida uu hore u shaaciyay Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah guddoomiyaha guddiga.
Sidoo kale, xubno ka mid ah guddiga ayaa la sheegayaa inay ogolaadeen dalabka beesha caalamka, kaas oo ah inay laali karaan doorashada hadiiba ay dhacdo in la helo arrimo lid ku ah sida laaluush iyo wax isdaba marin.
Qaar ka mid ah xubnahaasi ayaa soo jeediyay in awoodda cusub ee guddiga la hordhigo xidlhiabaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maalinta berri fadhi yeelan doonna kahor inta aysan bilaaban doorashada.
Warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heleyso ayaa sheegaya in guddoomiyaha baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu arrinkaan ka hor yimid, isagoo ka digay inay arrintaasi keeni karto qalalaase doorasho, waxaana shirar aan loo kala kicin haatan qaadanaya wakiilada ka socdo beesha caalamka, guddoonka labada aqal iyo guddiga anshaxa doorashada.
Illaa iyo haatan lama oga sida ay ku danbeyn doonto arrintaan, iyadoona durbadiiba ay cabsi weyn soo wajahday qaar ka mid ah musharixiinta ugu cad-cad ee galaan-galka weyn ku leh xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo qorsheynaya inay laaluushaan xildhibaanaas.